Home Wararka Dibada Abaarta Soomaaliya: “Wiilkeyga waddada ayaan kusii aasay gabadheydana meeshii aan tagay”
Abaarta Soomaaliya: “Wiilkeyga waddada ayaan kusii aasay gabadheydana meeshii aan tagay”
Dhibaatooyinka ka dhashay saamaynta abaaraha ayaa in muddo ahba laga soo tabinayay meelo Soomaaliya ah, mararka qaarna waxaa soo baxayay warbixinno aad u naxdin badan.
Dhowr sano oo uusan roobkii la filayay di’in ama meelaha qaar uu aad ugu yaraa ayaa sabab u noqday in bulshooyinka xoolo-dhaqatada ah ee miyiga ku nool ay soo wajahdo cunno-yari iyo biyo-yari.
Marka laga soo tago xoolaha qoysas badan ka dhammaaday, dadka ayaa ka tagay deegaannadooda kaddib markii ay macluul soo food-saartay.
Inkastoo ay jiraan waddamo kale oo ka tirsan gobolka Geeska Afrika oo ay abaaruhu saameeyeen, haddana Soomaaliya ayay kasoo baxayaan sheekooyinka ugu naxdinta badan.
Dadka wajahaya gaajada ayay tiradoodu korortay boqolkiiba konton, dhowrkii bil ee la soo dhaafay. Dad badan ayaa barakacay sababahaas dartood, iyadoo ay xaaladda uga sii dartay colaadda Ukraine oo keentay in qamadigii laga joojiyay meelaha loo dhoofin jiray.
Qiyaastii 7 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa qarka u saaran inay cunto-la’aan ku dhacda, sida ay tabiyeen hay’adaha gargaarka. Tan iyo bishii January ee sanadkan ugu yaraan 448 carruur ah ayaa u dhintay nafaqo-darro, sida lagu xusay xog kasoo baxday hay’adda UNICEF.
Wargayska New York Times ayaa isbuucan daabacay sheeko ku saabsan haweeney Soomaali ah oo ka mid ah dadka ay sida ba’an u gaartay musiibada ka dhalatay abaaraha.
“Waan aasnay, waana sii soconnay”
Xirsiyo Maxamed ayaa markii uu dalaggeedii roob-la’aan u xumaaday, arigii ay haysatayna uu ka dhammaaday, waxay go’aansatay in ay kasoo tagto gurigeeda oo ku yaallay Koonfur-galbeed Soomaaliya.
Waxay soo xambaarsatay, qaarna gacanta soo qabsatay saddex ka tirsan siddeed carruur ah oo ay dhashay, iyadoo cagta soo saartay waddo dheer oo kuleyl iyo bus badan, mararka qaarna uu heer-kulku gaarayay ilaa 100 digrii oo cabbirka kulaylka lagu qiyaaso ah.
Intii ay dhexda kusii jirtay, wiilkeeda Aadan oo saddex sano iyo bar jiray ayaa dhaqaaqi waayay, waxa uuna ka baryay inay siiso raashin iyo biyo. Balse wax ay siiso uma aysan haynin, sida ay u sheegtay wargayska New York Times.
“Waan aasnay, waana sii soconnay,” ayay tiri.
Afar maalin oo socod ah kaddib waxay gaareen xero loogu talagalay dadka soo barakacay oo ku taalla magaalada Doolow. Laakiin gabadheeda oo 8 jir ahayd oo ay nafaqo-darro aad u xun ku dhacday ayaa isla markiiba billowday qufac, wayna geeriyootay, sida ay sheegtay.
Abaarta Soomaaliya oo mareysa xaalad deyro ah
Abaarta Soomaaliya oo sababtay sare u kaca kiisaska jadeecada
Dad abaarta ay barakicisay oo gaaray Muqdisho
Iyadoo dhex fadhisay teendho si kumeel-gaar ah hoy looga dhigay oo ku taalla xerada, dhabtana ku haysata gabadheeda Maryam, oo 2 sano iyo bar jirta, ayay bishii lasoo dhaafay tiri: “Abaartan wax walba way naga dhammaysay.”
Hooyooyin kale oo badan ayay ku dhaceen xaalado la mid ah ama u dhow tan Xirsiyo.
Carruurta qaar waxay xamili waayeen culeyska safarka iyo dhibaatada gaajada iyo xanuunno isugu darmay. Waxaa ka mid ahayd Fardowsa oo saddex sano jir ahayd oo lagu aasay meel aan ka fogeyn xerada uu qoyskeedu degay oo ku taalla Doolow.
Waxay dhimatay wax yar un kaddib markii uu qoyskeeda halkaas gaaray. Gaajada ka sokow, nafaqo-darro ayaa haysay, waxaana ugu darmay jadeeco iyo cagaarshow.
“Waxay u dhimatay in aan u waayay wax aan ku badbaadiyo. Wax aan ku tifqiyo ayaan waayay. Haddii aysan abaarta ahaan lahayn oo ay ii joogi lahaayeen xoolaheyga, gabadheyda wax aan ku badbaadsado ayaan u heli lahaa,” ayay tiri Fardowsa ayeeyadeed oo la hadashay BBC-da.
Qaramada Midoobay waxay ka digtay in hal milyan iyo afar boqol oo kun oo carruur ah oo ku sugan Soomaaliya ay sanadkan wajihi doonaan nafaqo-darro.
Previous articleGuurka: Talooyin muhiim ah oo loo soo jeediyay dadka isguursanaya
Next articleSquid Game: Netflix oo filimkeedii ugu daawashada badnaa u beddeleysa tartan furan
Rooble oo Maanta guddoomiyay shirkiisii ugu dambeeyay ee Golaha Wasiirrada
Dagaal ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose & Faah faahin laga helayo
DAAWO:- MUQAAL”GUUDOOMIYE KU-XIGEENKA HORE AMNIGA GOBOLKA HIIRAAN XILKII WAa LARAADIN JIRAY...